F-i60T လက်ဗွေအချိန်တက်ရောက်စက်ပစ္စည်း, လက်ဗွေတက်ရောက်စက်, biometric လက်ဗွေအချိန် Attendan စနစ်
 » hardware » လက်ဗွေ
လက်ဗွေ biometric လက်ဗွေအချိန် Attendan စနစ်, F-i60T လက်ဗွေအချိန်တက်ရောက်စက်ပစ္စည်း, လက်ဗွေတက်ရောက်စက်
အလယ်တန်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ SDK ကိုထောကျပံ့
ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိုထောကျပံ့: VC ကို ++, C ++ Builder, vB, VB.net, Delphi, PB, ကို C #, မြင်သာသော
ဆက်သွယ်ရေး: TCP / IP, ယူအက်စ်ဘီ
F-i60T လက်ဗွေတက်ရောက်စက်လက်ဗွေ entry ကိုအပြီးသတ်ဖို့ image ကိုဝယ်ယူ chip ကိုနှင့် fingerprint algorithm ကို chip ကိုပေါင်းစပ်ပြီး, image processing တွင်, အင်္ဂါရပ်ထုတ်ယူခြင်း, template ကိုမျိုးဆက်, template ကိုသိုလှောင်မှု, လက်ဗွေရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (1:1) သို့မဟုတ်လက်ဗွေရှာဖွေရေး (1:N ကို) အင်္ဂါရပ်များ.
F-i60T လက်ဗွေကောက်ခံရေးလက်ရှိ USB မှတ် interface နဲ့ network interface ကိုထောက်ပံ့, ယင်း၏ပူးတွဲလျှောက်လွှာဆော့ဖျဝဲတစျဆငျ့အရာ, တစ်လက်ဗွေစုဆောင်းခြင်း system ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည့်, On-line ကိုလက်ဗွေ device ကို, On-line ကိုလက်ဗွေရာတက်ရောက်သူစက်, လက်ဗွေရာဒေသခံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်နှင့်လက်ဗွေကွန်ယက်ကိုရဲ့ login စနစ်က; ဆော့ဖျဝဲ Development Kit ထောက်ပံ့ပေး, အဆင်ပြေအလယ်တန်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ.
1. ထိရောက် optical module တစ်ခု, မည်သည့်လက်ချောင်းများအတွက်သင့်လျော်သော, သှေ့ခွောကျ, စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းလက်ဗွေရာကိုကောင်းစွာအသုံးနိုင်ပါတယ်.
512 လက်မသို့မဟုတ်ပိုကောင်း resolution ကိုတစ်ဦးလျှင်အစက်.
2. USB မှတ်သို့မဟုတ် network interface ကို (optional ကို).
4. အရည်အသွေးမြင့်မားအသုံးပြုခြင်းစက်မှုဇုန်တန်းပစ္စည်းများ ABS.
5. အလယ်တန်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ SDK ကိုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.
6. ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိုထောကျပံ့: VC ကို ++, C ++ Builder, vB, VB.net, Delphi, PB, ကို C #, မြင်သာသော.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်က F-i60T လက်ဗွေအချိန်တက်ရောက် Device ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်
နောက်တစ်ခု: semiconductor capacitive လက်ဗွေကောက်ခံရေး, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလက်ဗွေ Reader ကို
semiconductor capacitive လက်ဗွေကောက်ခံရေး, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလက်ဗွေ Reader ကို